Machadka Barashada Labada Luqadood | Machadka Luuqada Sare ee Houston ilaa iyo 1982-kii
Abuurista biriijyo ka dhexjira luqadaha & dhaqammada
Baro luqadda Ingiriisiga qaab qaabeysan oo waxtar leh.
Fasallo fiidkii si ay kuugu habboon yihiin.
Marna kama soo daaho barashada Isbaanishka!
BeI, waxaan kugula shaqeynaa sidii aan u hormarin laheyn xirfadahaaga una hormarin laheyd nidaamkaaga luuqada Ingiriisiga si aad nolosha ugu guuleysan karto. Ardayda F-1 waa soo dhaweynayaa!
Ku dhammaystir xirfadahaaga Ingiriisiga oo baro inaad si wax ku ool ah ula xiriirto oo aad kalsooni ku kalsoonaato. Mawduucyada dhabta ah ee Ingiriisiga iyo casharada Ingiriisiga aad ubaahantahay.
Noqo mid suuq badan ku suuq geli kara goobta shaqada! La soco walaac yar markaad la xiriirto dadka deegaanka! Koorsooyinkayadu waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan xirfado luqadeed oo aad dhab ahaan u isticmaali doontid.
Ameerika runtii waa dhul fursadeed, iyo BEI, waxaan ku jirnaa ganacsiga inaan ka dhigno fursaddaas inay dhacdo.
Ma xiiseyneysaa inaad dalbato fiisada ardayda? Ma dooneysaa inaad bedesho maqaalkaaga wadanka Mareykanka si aad wax u barato waqti buuxa? Miyaad dooneysaa inaad u wareejiso diiwaankaaga I-20 ee BEI?
BeI waxay ka caawineysay ururada dhaqamada kaladuwan in kabadan 38 sano sidii loo horumarin lahaa kartida guud ee shaqaalahooda.
Ma leedahay baahi luqadeed oo gaar ah? Barnaamijyada Gaarka ah waa laguu habeeyay oo adiga kaliya loogu talagalay Wax ku baro hal-hal, saaxiib, ama kooxo yar-yar.
Adeegyada Bulshada Qaxootiga
BeI, waxaan nahay bulsho caalami ah, oo matalaya dalal ka kala yimid adduunka oo dhan waayo-aragnimo waxbarasho oo gaar ah oo ka duwan tan kale. Halkan, waxaad ka faa'iidaysan doontaa barnaamijyada waxbarashada sare oo leh manhaj dhammaystiran oo si buuxda kuugu diyaarin doona noloshaada cusub ee Waddamada.
Iskaashiga jaamacada, waad badbaadin kartaa naftaada waqtiga iyo kharashka imtixaanka TOEFL. Guul laga gaaro barnaamijyadayada luqadeed ayaa kuu fududayn doona isqorista marka aad wax ka barato mid ka mid ah iskaashatooyinka caanka ah. Ka gudub dhammaan saacadahaas waxbarasho ee imtixaanka TOEFL oo toos toos ugu gala fasalka!
BeI waxay u adeegaysay bulshada qaxootiga ee Houston tobanaan sano. Adeegyadeena waxbarashadu waa kuwo muhiim u ah xoojinta iyo qalabeynta deggeneyaasha cusub xirfadaha Ingiriiska si ay ugu dhex maraan guryahooda cusub. Waxaan ardaydayada baraynaa inay noqdaan kalsooni iyo geesinimo inta ay kufiican xirfadaha wada xiriirka.
Dunida maanta mashquulka badan, had iyo goor ma lihid waqti iyo awood aad ku yeeshid fasalka. Taasi waa sababta fasalka uu kuugu imaado, iyada oo koorsooyinka khadka tooska ah loogu talagalay in lagu bixiyo tilmaamaha caadiga ah ee ka imanaya raaxada gurigaaga. La xariir barayaashaada iyo saaxiibadaada inta aad sii kordhineyso aqoontaada oo aad ku balaariso dib u soo celintaada.
Soo bandhig Gaara fasallo gaar loo leeyahay 2020
Khaaska ah Thanksgiving 2020
Halloween Bixinta Gaarka ah 2020
Bixinta Gaarka ah - Fasallada Isbaanishka, Oktoobar 2020
September 11, 2020 Soo bandhigid Khaas ah